My appearance Political now ! ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » My appearance Political now !
အင် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံ ဗမာပြည် ခေါ် မြန်မာပြည်သည် ဘာလိုလိုနဲ. ၂၀၁၄ထဲရောက်လာပါပြီ နိုင်ငံရေးအနေနဲ. ကြည်.မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ ပြောင်းလဲမူ
ရှိသလဲလို. မိဘပြည်သူ မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကို မေးကြည်.ချင်ပါတယ်။ဒေါ်စု President ဖြစ်ဖို.ဆိုရင် Construction ပြင်ရမယ် အခုထိပဲ ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ တိုင်းရင်းသားအရေးကော် ဘယ်အဆင်.ထိ လုပ်ဆောင်ပြီးပြီလဲ တစ်နှစ်ပြီးတစ် နှစ် ပြီးတာ ပြီးဆုံးသွားတာ။တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲ.
ရေး (Cease fire) ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ဆောင်ပြီးပြီလဲ ပြီးတော. မူယစ်ဆေးကိုကော် ဘယ်လောက်ထိ တိုက်ဖျက်နေပြီလဲ မြန်မာပြည်မှာ (Eradication Drug)ပြန်ကြည်.ရင် ထူးခြားမူမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားနဲ. အပစ်အခတ်ရပ်ရေးလုပ်ဆောင်တာ စာရွက်စာတမ်းထဲမှာတာရှိတာ တကယ်တမ်းလက်တွေ. အကောင်အထည်မရှိသေးပါ ဘူး။အခု ၂၀၁၄မှာကော် အစိုးရ ဖွဲ.စည်းပုံကိုပြင်မယ်ဆိုရင် စစ်တပ်က ထောက်ခံမဲပေး မလား။Freedom ဖြစ်မှာလား အများကြီးပဲ။အခုထိပဲ အစိုးရသည် သူ.အာဏာမြဲဖို.ပဲ ဒီ နာဂစ် ဖွဲ.စည်းပုံသည် ကျွန်တော်တို.တိုင်းရင်းသားအတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။ရှမ်းပြည်အတွက်ဆိုပိုဆိုးသေး ရှမ်းပြည်ကို အစိပ်စိပ် အမွှမွှဖြစ်အောင် လုပ်တယ် ရှမ်းပြည် မှာရှိတယ် ရှမ်းမျိုးနွယ်စုများကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်. (Autonomy) ပေးတယ်။ဒါပာာ
မဖြစ်တင်.ဘူး ကဲ ဥပမာ ၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ဖွင်. ပအိုဝ်. ဓနု တို. နယ်မြေ စသဖြင်.ပေါ. အဲထဲမှာရှိတဲ. ရှမ်းလူမျိုးတွေကော် ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲသိကြလား။ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါဘူး မြေမရှိ အိမ်မရှိ နောက်ဆုံး ယိုးဒယားရောက် ရှင်းရှင်းပြောမယ် ဒုက္ခရောက်တဲ.လူ နောက်ဆုံး Sexy ဘ၀ရောက်သွားတာ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းဘူး။ဖွဲ.စည်းပုံ ကိုကျွန်တော်.အနေနဲ. အသစ်ပြန်ရေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ပြည်ခုနှစ်ပြည် တိုင်းခုနှစ် တိုင်း အစိုးရဖွဲ.စည်းခဲ.တဲ. အခြေခံဥပဒေထဲက အဲဒါလဲ တိုင်းရင်းသားအတွက် အရမ်း
နစ်နာတယ်။ရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ် ကျွန်တော် အခုထိပဲ ဗမာစစ်အစိုးရကို အခုထိပဲ လုံးဝ လုံးဝ ယုံကြည်မူမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားကို သတ် မိန်းခလေးဆို မုဒိန်းကျင်. ကျာ်းကြတော. သတ်ဖြတ် Porter ဆွဲ အဲဒါကို အခုထိပဲ မျက်လုံးထဲကနေ မထုတ်နိုင်ဘူး ရှမ်းလူမျိုးသည် ရှမ်းပြည်လူထုများ မနေရဘူး။တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ ကူးပြောင်းနေရတယ်။ထို.အတူပဲ ကျန်တဲ. တိုင်းရင်းသားလဲ အဲထဲကဆို ကချင်က အဆိုးဆုံး ကချင်ပြည်သူလူထုတွေကအရမ်းသနားဖို.ကောင်းတယ် လိုင်ဇာမှာစစ်ဖြစ်တုန်းက
ကချင်ပြည်သူလူထုဆို တစ်ဖက်နိုင်ငံ စောက်တရုတ် နုိင်ငံထွက်ပြေးတာ ခိုလုံခွင်. တောင်မပေးဘူးချက်ခြင်းမောင်းထုတ်တယ်။လူသားခြင်းစာနာစိတ်မရှိဘူး( Crass Minds) အဲဒါကိုတောင် Confluence (မြစ်ဆုံ) တောင်ပြန်စခြင်နေသေးတယ်။စောက်တရုတ်က မကောင်းဘူး ဗမာပြည်အစိုးရအတွက်ပဲ ကျေးဇူးရှင်ဗမာပြည် သူ မြန်မာပြည်သူအတွက်တော. အမြဲတမ်း ရန်သူပဲ။လွန်ခဲ.တဲ. နှစ်ပတ်က မန်း လေးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ.တဲ. စိတ်ရွှေဆိုင်မှတ်မိ.မှာပါ အဲဒါလဲ စောက်တရုတ်ပဲသူတို.တရုတ်ပြည်အဲလိုသွားလုပ်ကြည်.ပါလား။ချက်ချင်း သူတို. ဥပဒေနဲ. ညစ်ပြီး ပြီးဆုံးနိုင်မှာမပာုတ်ဘူး ဒီဗမာပြည်ပဲ ဥပဒေစိုးမိုးမူမရှိတာ(Law and order)မြန်မာဗ
မာအစိုးရအတွက် ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာ တစ်ခုရှိပါတယ် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ. ကိုယ်ပိုင် ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိပါ တိုင်းရင်းသားကိုလေးစားပါ တိုင်းရင်းသားလဲဗမာစစ်အစိုးရကိုလေးစားပါတစ်ယော်နဲ. တစ်ယောက်လေးစားမူ အပြည်.အ၀ရှိပါ။(လော
လောဆယ် စာရေးဆရာအတွက်တော. ယုံကြည်မူမရှိဘူး စစ်အစိုးရကို) နှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်နဲ. စေတနာအပြည်.အ၀ တိုင်းပြည်အပေါ်ကိုထားပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါ။ဒါပေမဲ. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမြဲ လက်ဆွဲဆောင်တစ်ခုရှိတယ် ပြည်ပအားကိုကိုးပြီး ပုန်ကန်သူ ဆန်ကျင်ကြဆိုတာ မှားနေတယ် အဲဒါက အစိုးရပါ ဝေးဝေးမကြည်.နဲ.လေ တရုတ်နဲ.
ဗမာစစ်အစိုးရပေါင်းပြီး လက်ပံတောင်းတောင် အရေးနဲ. မီးလောင်ဗုံးနဲ. မျက်ရည်ယိုဗုံးသုံးပြီး ပြည်သူလူထုကိုလုပ်ခဲ.တာလေ အဲဒါလဲ အစိုးရပါဝင်ပါတ်သက်မူမရှိဘူးလို.
ဘယ်သူ Deny မှာလဲ။ပာုတ်ပါပြီ President ,Vice President and Defence Gel: တို.အပေါင်းတို. ပြည်ထောင်စုမြန်မာပြည်ကိုဒီနှစ်ကစပြီး အေးချမ်းသာယာပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ.ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးပါလို. နဂိုန်းချုပ်ရင်းနဲ.တောင်းဆိုချင်ပါသည်။(ကျွန်တော်ရေးသာမှားတာရှိခဲ.ရင် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါသည်။)
>>> Thank you ! Come read and visit again kha <<<